Warbixin: Qodobbada Looga Hadlay Kulanka Mucaaradka Xasan Sheekh iyo Guddiga Federaalka Ah Ee Doorashada Dadban – Goobjoog News
Xildhibaannada Baarlaamaanka oo Maanta U Codeynaya Heshiiskii Villa Somalia iyo Dowlad Goboleedyada
Warbixin: Qodobbada Looga Hadlay Kulanka Mucaaradka Xasan Sheekh iyo Guddiga Federaalka Ah Ee Doorashada Dadban
Murashaxiinta madaxtinnimada Soomaaliya 2016-ka ayaa maanta magaalada Nairobi kula kulmay guddiga heer federal ee doorashada dadban iyagoo kala hadlay arrimo ku saabsan doorashada sanadkan iyo cabashada ay qabaan.
Cali Maxamed Nur Americo oo ah murashax madaxtinnimada 2016-ka, kana mid ahaa dadkii guddigan la kulmay ayaa Goobjoog News u sheegay in guddiga doorashada dadban ee heer federaal ay ballan-qaadeen in doorashada u qaban-doonaan si cadaalad ah isla markaana ay murashaxiinta ula dhaqmi doonaan si simman.
Cali Nur America waxaa kaloo uu sheegay in guddiga ay kala hadleen sidii dadka murashaxiinta matalaya ay u tagi lahaayeen goobaha ay ka dhaceyso doorashada 2016-ka iyo in murashaxiinta la siiyo ciidamo xilliga ay ku jiraan daacayadda doorashada.
Kulanka dhanka guddiga doorashada waxaa uga qeyb-galay ilaa 4 qof oo ay ku jireen guddoomiyaha Cumar Cabdulle iyo Saciid Qoorsheel halka mucaaradka ay ka socdeen Maxamed Cabdulahi Farmaajo, Maxamed Cali Nur Amerika, Cali Maxamed Geedi, Cabdiraxmaan Baadiyow, Cabdiweli Axmed, Dr. Cabdinasir, Cali Xaaji Yusuf iyo Cabdiqadir Jama Barre.
Dhinaca kale, todobaadkan waxaa xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho kulan ku qaatay qaar ka tirsan murashaxiinta iyo beesha caalamka, iyadoo laga hadlay doorashada iyo cabashada ay murashaxiinta qabaan.
Kulanka Axsaabta iyo murashaxiinta ka qeybgalay waxaa ka mid ahaa: Cabdiraxman Cabdishakur, Axmed Fiqhi, Salaad Cali Jeelle, Tarsan iyo mas’uuliyiin kale halka beesha caalamka ay fadhiyeen Qaramada midoobey, Midowga Yurub, Midowga Afrika, UK, Talyaaniga iyo waddamo kale.
Inkasta oo Axsaabta iyo Murashaxiinta ka gaabsadeen in Goobjoog News uga warramaan natiijada shirka hadana warar aanu helnay ayaa sheegaya in shirkaas looga hadlay sidii beesha caalamka korjoogayaal ugu yeelan laheyd doorashada, kaalinta murashaxiinta ee doorashada iyo goobaha ay ka dhacayaan, waxaa kaloo laga hadlay nabadgalyada goobaha doorashada iyo sidii doorashada u noqon laheyd mid hufan oo cadaalad ku dhacda.
Sanadkan waxaa dalka ka dhaceysa doorasho, Jadwalka doorashada waxaa ku qoran sidan:
Aqalaka sare 25 September
Baarlamaanka 24 September – 10 October
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka 25 October
Maxaa Qabsoomay Ilaa Hadda:
Madasha waxaa ay arbacadii sheegtay in doorashada ay waqtigeeda ku dhici doonto, taas oo micnaheedu yahay in taariikhyada aan kor ku sheegnay ay sidoodii yihiin.
Dhameystirka hubinta liiska odoyaasha 135-ta ahaa, inta nool iyo inta dhimatay iyo xitaa Odyaasha lagu badaly kuwii hore, waxaa arrintaas ugu dambeyay in Odoyaasha lagu daray Ugaas Xasan Ugaas Khalif.
Doorashada: Guddiga Doorashada dadban ee heer federal, kuwaas oo shaqada bilaabay haddii ay ahaan laheyd jadwal sameyn, Tababar iyo xitaa booqasho ay ku tageen goobaha doorashada ay ka dhaceyso.
Doorashada Guddiyada doorasho heer dowlad goboleed: waxaa ay is barteen guddiga heer federal, tababar ayey qaadeen, waxaana hadda la diyaarinayaa goobihii ay ka dhici laheyd doorashada dadban.
Magacaabista iyo dhameystirka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2016-ka, waxaana lagu wadaa in guddiga lagu kabo khubaro caaalami.
Sameynta Xeer Anshax oo Madasha saxiixday, lagana rabo in ay saxiixaan dadka u tartamaya Xildhibaannimada iyo xitaa xilka madaxweynimada.
Waxaa socda xulista ergo doorasho, oo beelo badan oo Goobjoog News la hadlay waxaa ay sheegeen in Odoyaasha qaar hayaan liiska ergada doorasho.
Beesha caalamka oo bixisay 60% lacagta doorashada
Waxaa Xal laga gaaray in beeshii 3 kursi leh ay mid haween noqota, waxaa kaloo lagu qasbay in dowlad goboleedyada ay aqalka sare hubiyaan 30%.
Maxaa Qabsoomi Waayey:
Weli ma dhismin maamullada Hiiraan/ Shabeellada dhexe.
Weli lama xallin cabashada beelaha qaar sida Somaliland.
Lama oga halka ay ka dhacayaa doorashooyinka qaar, aqalka hoose iyo midka sare.
Dowladda federaalka ah oo lacagta doorashada ee 40% aan gacanta ku heyn.
Lama diyaarin Hoolalka ay ka dhaceso doorashada 2016-ka.
Lama oga ciidamada iyo cidda amniga sugi doonta.
Dowlad Goboleedyada dalka weli ma bilaabin dhismaha aqalka sare oo la doonayo in la dhameystiro bishan 25-keeda, Hiiraan/Shabeellana maamul ahaan ma dhisnaba
Upper House-ka iyo Somaliland oo meesha joogin
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Hambalyo U Diray Baarlamaanka Hirshabeelle
Saddex Kamid Ah Raggii Weerary Hotelka Naasa Hablood 2 Oo Nolosha Lagu Qabtay
Muwaadiniin Maraykanka Oo Lagu Qafaashay Ciraaq
Ueohey tlhcsk 50mg viagra how to get cialis
Kcnsmz noeosc Viagra brand when will generic cialis be available
Mukhallisiin iyo 35 Qof oo Tahriibayaal Yurub u Socday Ayaa Lagu Qabtay Dalka Mauritania
Kaydka Goobjoog Select Month September 2020 (133) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
buy cialis online cialis generic...
cialis dosage 40 mg dangerous cialis 200mg...
generic cialis at walgreens pharmacy generic tadalafil...
generic viagra india cheap viagra...